Raaxada farta iyo biyaha kulul | shumis.net
Home » galmada » Raaxada farta iyo biyaha kulul
Naagaha labo ayay u kala baxaan naago dareenkooda kore aad u daran iyo kuwo aan darnayn, dareenka kore waxaa laga wadaa camabarka afkiisa hore iyo faruuraha siilka, gabdho waxaa jira aad ugu raaxaysto faraha, marka ay dareemaan qooq farta isgaliya, xitaa uma baahna inay faraha boqa galiso, keliya waxaa ku filan inay meesha ku rugto kuna salaaxdo.
Naagaha qaabka ay ku siigaystaan waa sidaas, siigada dumarka faraha ayay ku bilaabataa, inkastoo gabdhaha sidaas ay u badan yihiin, laakin garoobada waxay raadsadaan wax farta ka weyn sida mooska oo kale ama qajaarka, naagta maku biyabbixi kartaa faraha?
Runtii haweenka biyaha fudud aad bay ugu biyabbaxaan farta, laakin kuwa biyahooda soo daaho faraha kuma filna waxay u baahan yhiin gus, waayo guska wuu ka kulul yahay farta waana ka weyn yahay, sidoo kale waa ka macaan badan yahay. meesha oo dhan ayuu buuxiyaa, farta dhib ma ku keentaa naagaha?
Title: Raaxada farta iyo biyaha kulul
Posted by Unknown, Published at March 03, 2016 and have 0 comments